fanontaniana Vrs SUPERBUG X
2 taona 1 herinandro lasa izay - 2 taona 1 herinandro lasa izay #415 by Colonelwing
no tena-tsipiriany sy araka ny marina simulation ny ady fiaramanidina nitombo mandrakizay ho an'ny Microsoft Flight simulator. Ny Superbug no ilay fahatanterahan 'saika 10 taona ny asa niaraka niverina tany FS2004, ary mbola ho tohanana amin'ny matetika navoaka. Avy avionics ny fiadiana rafitra, raha ny ao amin'ny tena fiaramanidina, fa angamba amin'ny simulation ity! Ny Superbug no voalohany (ihany) ny tena 3-mpiray lalitra-by-tariby ady natao ho an'ny FSX fiaramanidina. Ny fiaramanidina rafitra fanaraha-maso dia tsy ho "manidina-by-tariby-toy ny" čas, izany ho tanteraka mavitrika, tanteraka ny lalàna mifehy--mila rafitra mitanila fiara tokana (lalàna tsy miankina) neutrally-fitohy-miovaova fototra sidina modely. Ny rafitra FBW dia mivelatra ny 100% fanao Tsy Mifantoka sy ny fiaramanidina talen'ny fiasan'ny.
Raha mitady ny tena bibikely ,, Io no ilay tianao manidina sy fitaovana in Gentelmen!
Fanovana farany: 2 taona 1 herinandro lasa izay Colonelwing.
2 taona 1 herinandro lasa izay - 2 taona 1 herinandro lasa izay #423 by Gh0stRider203
fotsiny iany hiala izany eto
2 taona 1 herinandro lasa izay #424 by Colonelwing
Haaaaaa ,, ka ny hendry eh! Bandy !!!
2 taona 1 herinandro lasa izay #429 by Gh0stRider203
Fotoana mamorona pejy: 0.243 segondra